हृत्तिक रोशन र टाइगर श्रोफको एक्सन फिल्म वारको ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौं – बलिउड सुपरस्टार हृत्तिक रोशन र टाइगर श्रोफको नयाँ फिल्म वारको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ ।
वारमा खतरनाक स्टन्ट र एक्सन सीन, फाइट सिक्वेन्स र टाइगर र हृत्तिकबीचको फेसअफ देख्न पाइन्छ ।
सिद्धार्थ आनन्दले निर्देशन गरेको फिल्म अक्टोबर महिनाको २ तारिखमा रिलिज हुँदैछ ।
कुल २ मिनट २५ सेकेन्डको ट्रेलरमा एक्सन भरपूर छ । हृत्तिकलाई खोज्न टाइगरलाई पठाइएको देखाइएको छ । भेट भएपछि दुईजनाबीच वार भएको देखाइएको छ ।
कार र बाइक चेजका सिक्वेन्सहरू दमदार देखिन्छन् । ट्रेलरका एक एक दृश्य भिजुअल ट्रीट हुन् । एक्सन र एड्भेन्चरबीचका भिजुअलले फिल्मलाई विशेष बनाएका छन् । एक्सन ड्रामामा ब्याकग्राउन्ड स्कोरले रोमाञ्च उत्पन्न गर्छ ।
यशराज ब्यानरमुनि बनेको वार हिन्दी, तमिल र तेलुगु भाषामा रिलिज गरिनेछ । यो फिल्म सात फरक देश र १५ शहरमा शूट गरिएको छ । एक्सन र स्टन्ट सीनहरूलाई चार फरक एक्सन डाइरेक्टरले गराएका हुन् ।
फिल्ममा वाणी कपूर पनि छिन् ।
भदौ १०, २०७६ मा प्रकाशित
बक्स अफिसमा 'बाला'काे आक्रामक व्यापार, २ दिनमै उठायो लगानी, कति गर्यो कमाइ ?
बलिउड अभिनेत्री सुष्मिता सेनको यो भिडियो भयो भाइरल [भिडियोसहित]
बक्स अफिसमा चलचित्र 'बाला'को आक्रामक शुरूवात, पहिलो दिनमै गर्‍यो यति धेरै कमाई
मेडिकल कलेजको मनपरी : ३ वर्षमा १२ मेडिकल कलेजले गरे पौने ३ अर्ब ठगी काठमाडौं – मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग लिने शुल्क सरकारले बर्सेनि रुपमा निर्धारण गर्छ तर सरकारले तोकेको शुल्कलाई बेवास्ता गर्दै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्कको नाममा ठग्ने ...
प्रतिबद्धताको छैन खाँचो, कोसँग छ सीमा विवाद हल गर्ने साँचो ?
बङ्गलादेशी राष्ट्रपतिको पोखरा भ्रमणले पर्यटन प्रवर्धन हुने विश्वास
भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा आएर रौतहटको प्रहरी चौकीमा बम प्रहार
गुरु नानक जयन्तीका अवसरमा विविध कार्यक्रम